हिमालय खबर | कोभिड खोप नलगाएका कारण ब्राजिलका राष्ट्रपति फुटबल हेर्नबाट वञ्चित
कोभिड खोप नलगाएका कारण ब्राजिलका राष्ट्रपति फुटबल हेर्नबाट वञ्चित
प्रकाशित २५ आश्विन २०७८, सोमबार | 2021-10-11 03:59:45
ब्राजिलिया । ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले कोभिडविरुद्धको खोप नलगाएकाले आफूलाई सान्तोस बनाम ग्रेमियो फुटबल म्याचमा प्रवेश निषेध गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको प्रेससँगको कुराकानीको सार्वजनिक भिडियोमा राष्ट्रपतिले आफूमा खोप लगाएकामा भन्दा बढी इन्टिबडी भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, किन खोप कार्ड चाहियो ? किन पासपोर्ट चाहियो ? म केवल खेल हेर्न चाहन्छु ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार राष्ट्रपति बोल्सोनारो हाल साओ पाउलोमा बिदामा रहेका छन् । ब्राजिलका नेताले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपप्रति शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा खोप लगाइएको पनि छैन ।
उनी जुलाई २०२० मा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका थिए । केही हप्ता क्वारेन्टिनमा बसेपछि नियमित काममा फर्किएका थिए । राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो लकडाउनको एक कट्टर विरोधी पनि हुन् जसले मास्कसमेत लगाउने गरेका छैनन् । एजेन्सी
काठमाडौँ । बंगलादेशविरुद्ध बराबरी खेल्दै नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ । नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको हो । आजको म्याचमा नेपाललाई कम्तीमा बराबरी नतिजा आवश् ...
काठमाडौँ । आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक क्रिकेट शृङ्खलाअन्तर्गत गए राति भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई पराजित गरेको छ । ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएको उक्त खेलमा नेपालले अमेरिकाल ...
काठमाडौँ । लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने एक्लैले छ विकेट लिएपछि नेपालले पपुवा न्यूगिनीविरुद्धको क्रिकेट सिरिज जितेको छ । नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई दोस्रो एकदिवसीय खेलमा १५१ रनले पराजित गर्दै सिरिज दुई शू ...
हिमालय खबर २२ भाद्र २०७८, मंगलवार
काठमाडौँ । पपुवा न्युगिनीविरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी भएको छ । केहीबेर अघि सम्पन्न खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई दुई विकेटले पराजित गरेको हो । ओमानको अल अमिरात ...